Lionel Messi Oo Laga Reebay Safka Kooxda Barcelona Ee Ka Qeyb Galaya Kulanka Dynamo Kiev Ee Champions League
HomeHoryaalka SpainLionel Messi oo laga reebay safka kooxda Barcelona ee ka qeyb galaya kulanka Dynamo Kiev ee Champions League
November 24, 2020 Horyaalka Spain, Wararka Ciyaaraha 0
Maamulaha kooxda Barcelona Ronald Koeman ayaa xaqiijiyay inuu ka reebay kabtankooda Lionel Messi safka kooxda wajahaya Dynamo Kiev kulan ka tirsan Champions League habeenka talaadada.
Xaalada Messi ee Camp Nou ayaa wali ku sii xoogaysanaysa cinwaanada wararka kasoo baxa Spain kadib markii xidiga uu isku dayay ka dhaqaaqista kooxda.
Barca ayaa laga badiyay seddex jeer, waxaana ay badisay kaliya hal kulan lixdii kulan ee ugu danbeysay ee La Liga taasoo ka dhigtay inay kaalinta 12aad kaga jiraan kala horeynta horyaalka , iyadoo durbaba 12 dhibcood ka dambeysa kooxda Real Sociedad.
Si kastaba ha noqotee, waxay heystaan ​​rikoor fiican ilaa iyo haatan G Group-ka Champions League, Koeman wuxuu ku adkeysanayaa in booska ay kooxdiisu ka taagan tahay hogaamiyaasha kooxdooda ay tahay sababta ka dambeysa in Messi laga reebo safarka Ukraine.
Waxaan heysanay ciyaartoy kala duwan dhaawacyo dartiis, waxaana go’aansanay inaanan qaadan doonin Leo ama Frenkie [de Jong] maxaa yeelay xaalada Champions League waa mid aan heysano sagaalka dhibcood “Koeman ayaa u sheegay suxufiyiinta.
“Labadan ciyaartooy waxay u baahan yihiin inay nastaan ​​maxaa yeelay waxay dheeleen kulamo badan. Marka waxaan u maleyneynaa inay tahay daqiiqad wanaagsan oo la nasiyo.”
Barcelona, ​​oo lumisay Ansu Fati iyo Gerard Pique dhaawacyo muddo dheer ah usbuucyadii la soo dhaafay, ayaa xaqiijin doonta booskooda wareega 16ka guul ay ka gaaraan Dynamo Kiev.
Messi ayaa leh lix gool iyo afar caawin 11 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, oo ay ku jiraan seddex gool iyo labo caawin seddexdiisii ​​kulan ee Champions League.